NY AMIN’NY ADIDY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 23, 2018 Laisser un commentaire sur NY AMIN’NY ADIDY
« Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an’i Kaisara izay an’i Kaisara ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. » (Matio 22:21)
– Fakam-panahy ny vola:
Sarotra ho antsika olombelona ny ivoaham-mbola raha ivelan’ny sitrapontsika, indrindra fa raha andoavana hetra na andoavana adidy any am-piangonana dia mafy amintsika. Nefa raha izao ambaran’i Jesosy izao dia tokony ataontsika avokoa izany adidy izany.
– Mitaky fanetren-tena:
Mety alaim-panahy hitsara ny fitondràna misy ny olona, kanefa araka izao voalaza izao dia omeo an’i Kaisara izay an’i Kaisara. Mety misy koa ny tsy rariny na dia eo amin’ny fitondram-piangonana aza, kanefa aloavy ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. Mijery izay ataontsika Andriamanitra, tahaka an’i Jesosy nipetraka tandrifin’ny fandatsahan-drakitra: mijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao Izy.
– Mitaky finoana: Tsy nanan-kaloa Jesosy sy Petera teo am-pelatanany, fa Jesosy nahita fomba mahagaga handoavana ny anjaran’Izy sy Petera. Antsoy ny Tompo amin’izay mavesatra amintsika rehetra. Raha hino isika dia ho hitantsika ny voninahitr’Andriamanitra. An’Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Publié parfilazantsaramada novembre 23, 2018 Publié dansUncategorized